Hibilaogy i Khatam, Fiaramanidina Nianjera & Niharam-boina, Mofo & Fahalalahana! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Novambra 2017 1:48 GMT
Araka ny filazan'i Zannevesht, vehivavy Iraniana bilaogera sady mpanao gazety, nanapa-kevitra hibilaogy amin'ny faran'ity herinandro ity ny filoha teo aloha Khatami. Vonona ny bilaoginy, Khatamionline, izay mbola tsy misy lahatsoratra saingy efa nahazo fanehoan-kevitra mihoatra ny 240 mba handrisika azy hibilaogy! Nanangana bilaogy tena nahomby taona vitsy lasa izay ny namany, filoha lefitra teo aloha, Abtahi.
Nanakiana ny teny filamatry ny governemanta mikasika ny Mofo & Trano Fonenana i Ali Mazroi, mpanao politika reformista. Nilaza izy fa te-hitondra fahalalahana ho an'ny vahoaka ny revolisiona ary tsy mahafa-po ny vahoaka Iraniana ny mofo sy ny trano fotsiny. Araka ny filazany, tsy maintsy omena ny filàna ara-pitaovana ary tsy hanadino ny rariny sy ny fahalalahana.
Milaza i Sibestan fa miaina ao anatin'ny toe-javatra sarotra ny olona very trano noho ny fianjerana fiaramanidina tao amin'ny tranon'izy ireo. Matahotra izy ireo hiresaka amin'ny mpanao gazety. Toa tsy mba nahazo fanampiana lehibe avy amin'ny governemanta izy ireo ary tsy misy ny fanohanana ara-pahasalamana na ara-pitaovana. Hoy ireo niharam-boina hoe:
“There are 40 who got injured and many more are suffering from psychological problems…Survivors say when responsible are going take care of our needs”!(Persian)
“Misy 40 ireo naratra ary maro no mijaly ny olana ara-psikolojika … Nilaza ireo niharam-boina hoe rahoviana ny tompon'andraikitra no hijery ny zavatra ilainay!”